ရက္ခိုင့်တပ်မတော် AA ဗိုလ်သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား (ယခင်ဓါတ်ပုံဟောင်း - AA Info Desk)
AA ရခိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်နဲ့ မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်တွေ အခု တိုက်ပွဲငယ်တွေပြန်စဖြစ်တာကနေ အရင်လို တိုက်ပွဲကြီးတွေဆက်ဖြစ်လာမလား စိုးရိမ်မူတချို.ရှိလာနေပါတယ်။
အခုလို ယာယီတိုက်ပွဲငယ်တွေ ဖြစ်ဖို့ မြေပြင်အနေအထားတွေရှိနေသလို၊ တချို.တိုက်ပွဲကြီးတွေအလားအလာကိုလည်းစိုးရိမ်ရပေမဲ့၊ လက်တွေ့မှာတော့ အရင်လို ရေရှည်တိုက်ပွဲကြီးတွေအထိဖြစ်လာဖို့ မလွယ်ပါဘူးလို့၊ ရခိုင်အနီးကပ်သုံးသပ်သူတွေက ဆိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။
ဒီအကြောင်း ဝံလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်း အမူဆောင်ဒါရိုက်တာနဲ့ ရခိုင်ပြည်အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မီတီ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ခိုင်ကောင်းစံ နဲ့၊ မြောက်ဦးမြို.နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်း ဦးဦးလှစောတို့ကို ကိုဝင်းမင်းက မေးထားပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။.။ ဟုတ်ကဲ့ ၊ ခိုင်ကောင်းစံ ကို မနေ့ညကမေးရာမှာ လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေ စဖြစ်လာပုံကို စရှင်းပြပါတယ်။
ခိုင်ကောင်းစံ ။. ။ သူတို့ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ နယ်ကြွံပြီးမှ ဖြစ်တဲ့ တိုက်ပွဲပေါ့နော်။ ဗမာ့တပ်မတော်ကလည်း အဲဒီနယ်စပ်ကို သွားတဲ့အချိန်မှာ ဒီမောင်တောမြောက်ပိုင်းပေါ့လေ။ ရခိုင်တပ်တော် AA က အခြေပြုစခန်းချထားတဲ့နေရာထဲကို နယ်ကြွံလာတာပေါ့နော်။ အဲဒီအပေါ်မှာ ဖြစ်ကြတာပေါ့နော်။ ပထမတိုက်ပွဲကတော့ ၉ ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့ တိုက်ပွဲပေါ့။ နောက် ဒီနေ့မနက်မှာ တခါဖြစ်တယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ၉ ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့ ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့နေရာက မတူဘူးပေါ့။ ဒီနေ့မနက်ဖြစ်တဲ့ နေရာကတော့ နရန်းချောင်းဆိုတဲ့ ရွာဖက်မှာပေါ့နော်။ အဲဒီရွာမှာဆိုရင် ကသည်းတိုင်းရင်းသားတွေရွာတည်ထားတယ်။ နောက် အစိုးရရဲ့ လဝက စီမံကိန်းအဲဒီလိုနေရာတခုပေါ့။ အဲတော့ဒီလိုတိုက်ပွဲမျိုးက အချိန်မရွေးဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါမောင်တောဒေသမှ မဟုတ်ဘူး။ တခြားနေရာတွေမှာလည်း မမျှော်လင့်တဲ့ တိုက်ပွဲမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။
ကိုဝင်းမင်း ။.။ အဲတော့ ဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ပွဲမျိုး ဖြစ်ရာမှာ ထူးခြားမှုကို မေးရာမှာ ဦးဦးလှစော ကလည်း အခုလိုထောက်ပြပါတယ်။
ဦးဦးလှစော ။. ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်နော် ၊ ဒီနိုဝင်ဘာ ၁၁ မှာ နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဌကြီး မစ္စတာ ဆာဆာကာဝါ နဲ့ ကျနော်တို့ တွေ့တယ်ဗျ။ သူက နေပြည်တော်က ပြန်လာတာဆိုတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လည်းတွေ့ခဲ့တယ်။ အခုလောလောဆယ် SCC ရဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ လည်း တွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ ကျနော်တို့ ရခိုင်တပ်တော်ခေါင်းဆောင်ကို Message တခုပေးတယ်။ နောက်နေ့မှာ Statement တခုကို တပ်မတော်နဲ့ AA နဲ့ အတူထုတ်တယ်။ အဲတော့တနှစ်ပြည့်ပေါ့ဗျာ။ အမှတ်တရလေးပဲ။ အဲဒီကစတယ်ပေါ့ဗျာ။ သေနတ်ဖောက်တာတွေဘာတွေ ဘာမှမရှိဘူးပေါ့ဗျာ။ အခုဟာကလေ ဖြစ်နိုင်ချေက အများကြီးရှိတယ်ဗျ။ ဒါကတိုက်ဆိုင်မှုလား။ ဒါမှမဟုတ် တပ်မတော်ဖက်ကပေါ့ စစ်ဆင်ရေးပရိယယ်တခုလား ၊ ကျနော်တို့လည်း မခန့်မှန်းတတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ခြေအလားလာကတော့ ဒီနေရာမှာ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှု အသေးအဖွဲလေးတွေကနေ အကြီးကြီးမီးတောက်ဖြစ်မယ့်အလားလာကတော့ အများကြီး ရှိတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဒီနေရာမှာ အခုလိုတိုက်ပွဲငယ်တွေပြန်ဖြစ်လာဖို့ မြေပြင်အခြေအနေရှိနေပုံကိုလည်း ခိုင်ကောင်းစံ က
ခိုင်ကောင်းစံ ။. ။ Gentlemen's agreement ပေါ့ဗျာ။ ၂ဖက်စလုံးကတော့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေရှိနေတာပေါ့နော်။ ဒါပေမယ်လို့ တကယ်တန်းက ဒီနှစ်ဖွဲ့က သဘောတူညီမှုက ဥပမာ Bilateral agreement ထိုးထားတာမျိုးက ရှိမနေဘူး။ ဒါပေမယ့် အောက်ချေမှာကြတော့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ဧရိယာတွေမှာ ဒီအပေါ်က အမိန့်ကို နာခံတယ်ဆိုပေမယ့် တည်ဆောက်မှုတွေကို တွေ့နေရတယ်။ ဥပမာ တိုက်ပွဲမရှိပေမယ့်လို့ မြန်မာတပ်မတော်ကလည်း အင်အားတည်ဆောက်တာပေါ့။ ဥပမာ လက်နက် ရိက္ခာ လူအင်အား ရခိုင်တပ်တော်ကလည်း သူတို့ရဲ့ အနေအထားကို ခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်အောင် တည်ဆောက်နေတာပေါ့နော်။ အဲဒီတော့ဒါက နယ်ကြွံသွားတာပေါ့နော်။ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အချိန်မရွေးဖြစ်နိုင်မှုတော့ရှိတာပေါ့။ အဲဒါကြောင့် ရခိုင်ပြည်သူတွေကရော၊ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေသူတွေကရော သူတို့ဒေသကို ပြန်ချင်ပေမယ့် မပြန်နိုင်ကြဘူး။ ဒီတိုက်ပွဲက ဘယ်နေ့ဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းရခက်တာပေါ့နော်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ရှေ့မှာဆက်ဖြစ်လာနိုင်ပုံကိုလည်း ဦးဦးလှစော က အခုလိုပြောပါတယ်။
ဦးဦးလှစော ။. ။ အရင်တုံးက ပြောခဲ့ရာမှာလည်း AA ရဲ့ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင် ကိုလည်း သူတပ်မှူးတွေကို ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံတာတွေရှောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာရှိတယ်။ ရခိုင်မှာက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ အင်အားက သာလွန်အင်အားဖြစ်နေတယ်။ နယ်မြေတော်တော်များများကို ထိမ်းချုပ်နိုင်တယ်။ လူထုကလည်း ထောက်ခံမှုအရမ်းပြင်းထန်နေတယ်။ AA အနေနဲ့ ဆိုရင် ဘက်ပေါင်းစုံ တော်တော်လေး အခြေအနေကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်။ အဲတော့ ဒီဟာက မြန်မာတပ်မတော်ဖက်က သွေးစမ်းတာလား မြန်မာတပ်မတော်ဖက် မမျှော်လင့်ပဲထိပ်တိုက်တွေ့တာလား။ ထိပ်တိုက်တွေ့တဲ့နေရာက အတော်ဝေးတဲ့နေရာဆိုတော့ စစ်ရေးကိုတော့ ကျနော်မခန့်မှန်းတတ်ဘူး။ ဒီဖြစ်တဲ့ ကိစ္စအတွက်ကတော့ နှစ်ဖက်စလုံးက ဘယ်သူအတွက်မှ ကောင်းကျိုးမရှိဘူး။ အထူးသဖြင့် မြန်မာ့တပ်မတော့်အတွက်က ပိုပြီးတော့ အခက်တွေ့မယ်ထင်တယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ခိုင်ကောင်းစံ ကလည်း အရင်လိုမျိုး ရေရှည်တိုက်ပွဲကြီးတွေဖြစ်လာဖို့ မလွယ်ပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ခိုင်ကောင်းစံ ။. ။ စစ်ပွဲကတော့ ဘယ်သူမှမလိုချင်ဘူး ။ နောက်တခုက PDF တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ ၊ တပ်မတော်ထဲမှာရှိကြတဲ့ အရာရှိအရာခံ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီပြည်သူဖက်ကို ပြောင်းနေတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်။ နောက်တခါ ကရင်မှာလည်း ဒီတိုက်ပွဲတွေရှိတယ်။ နောက်ကချင်နဲ့လည်းဖြစ်နေတယ်။ စသည်အားဖြင့် အဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ၂ဝ၁၈ ၊၂ဝ၁၉ လိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာမျိုးကတော့ ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်နည်းပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။.။ တကယ်တော့ အခုလို တိုက်ပွဲတွေပြန်စဖြစ်လာတုံးမှာ စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်း က AA နဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ပဲ ARSA အဖွဲ့နဲ့ဖြစ်တာပါလို့ ပြန်ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
AA ရခိုငျလကျနကျကိုငျတပျနဲ့ မွနျမာစဈကောငျစီတပျတှေ အခု တိုကျပှဲငယျတှပွေနျစဖွဈတာကနေ အရငျလို တိုကျပှဲကွီးတှဆေကျဖွဈလာမလား စိုးရိမျမူတခြို.ရှိလာနပေါတယျ။
အခုလို ယာယီတိုကျပှဲငယျတှေ ဖွဈဖို့ မွပွေငျအနအေထားတှရှေိနသေလို၊ တခြို.တိုကျပှဲကွီးတှအေလားအလာကိုလညျးစိုးရိမျရပမေဲ့၊ လကျတှမှေ့ာတော့ အရငျလို ရရှေညျတိုကျပှဲကွီးတှအေထိဖွဈလာဖို့ မလှယျပါဘူးလို့၊ ရခိုငျအနီးကပျသုံးသပျသူတှကေ ဆိုပါတယျ။ ဘာကွောငျ့ပါလဲ။
ဒီအကွောငျး ဝံလကျဖှံ့ဖွိုးရေးဖောငျဒေးရှငျး အမူဆောငျဒါရိုကျတာနဲ့ ရခိုငျပွညျအရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးမြား ငွိမျးခမျြးရေးကျောမီတီ ပွနျကွားရေးတာဝနျခံ ခိုငျကောငျးစံ နဲ့၊ မွောကျဦးမွို.နယျ ပွညျသူ့လှတျတျောအမတျဟောငျး ဦးဦးလှစောတို့ကို ကိုဝငျးမငျးက မေးထားပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဟုတျကဲ့ ၊ ခိုငျကောငျးစံ ကို မနညေ့ကမေးရာမှာ လကျရှိတိုကျပှဲတှေ စဖွဈလာပုံကို စရှငျးပွပါတယျ။
ခိုငျကောငျးစံ ။. ။ သူတို့ရဲ့ ထုတျပွနျခကျြအရတော့ နယျကွှံပွီးမှ ဖွဈတဲ့ တိုကျပှဲပေါ့နျော။ ဗမာ့တပျမတျောကလညျး အဲဒီနယျစပျကို သှားတဲ့အခြိနျမှာ ဒီမောငျတောမွောကျပိုငျးပေါ့လေ။ ရခိုငျတပျတျော AA က အခွပွေုစခနျးခထြားတဲ့နရောထဲကို နယျကွှံလာတာပေါ့နျော။ အဲဒီအပျေါမှာ ဖွဈကွတာပေါ့နျော။ ပထမတိုကျပှဲကတော့ ၉ ရကျနဖွေ့ဈတဲ့ တိုကျပှဲပေါ့။ နောကျ ဒီနမေ့နကျမှာ တခါဖွဈတယျပေါ့။ ဒါပမေယျ့ ၉ ရကျနဖွေ့ဈတဲ့နရောနဲ့ ဒီနဖွေ့ဈတဲ့နရောက မတူဘူးပေါ့။ ဒီနမေ့နကျဖွဈတဲ့ နရောကတော့ နရနျးခြောငျးဆိုတဲ့ ရှာဖကျမှာပေါ့နျော။ အဲဒီရှာမှာဆိုရငျ ကသညျးတိုငျးရငျးသားတှရှောတညျထားတယျ။ နောကျ အစိုးရရဲ့ လဝက စီမံကိနျးအဲဒီလိုနရောတခုပေါ့။ အဲတော့ဒီလိုတိုကျပှဲမြိုးက အခြိနျမရှေးဖွဈနိုငျတယျ။ ဒါမောငျတောဒသေမှ မဟုတျဘူး။ တခွားနရောတှမှောလညျး မမြှျောလငျ့တဲ့ တိုကျပှဲမြိုးတှေ ဖွဈနိုငျတာပေါ့။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ အဲတော့ ဘာကွောငျ့အခုလိုတိုကျပှဲမြိုး ဖွဈရာမှာ ထူးခွားမှုကို မေးရာမှာ ဦးဦးလှစော ကလညျး အခုလိုထောကျပွပါတယျ။
ဦးဦးလှစော ။. ။ တိုကျတိုကျဆိုငျဆိုငျနျော ၊ ဒီနိုဝငျဘာ ၁၁ မှာ နိပှနျဖောငျဒေးရှငျး ဥက်ကဌကွီး မစ်စတာ ဆာဆာကာဝါ နဲ့ ကနြျောတို့ တှတေ့ယျဗြ။ သူက နပွေညျတျောက ပွနျလာတာဆိုတော့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့လညျးတှခေဲ့တယျ။ အခုလောလောဆယျ SCC ရဲ့ ဝနျကွီးခြုပျနဲ့ လညျး တှခေဲ့တယျပေါ့နျော။ ကနြျောတို့ ရခိုငျတပျတျောခေါငျးဆောငျကို Message တခုပေးတယျ။ နောကျနမှေ့ာ Statement တခုကို တပျမတျောနဲ့ AA နဲ့ အတူထုတျတယျ။ အဲတော့တနှဈပွညျ့ပေါ့ဗြာ။ အမှတျတရလေးပဲ။ အဲဒီကစတယျပေါ့ဗြာ။ သနေတျဖောကျတာတှဘောတှေ ဘာမှမရှိဘူးပေါ့ဗြာ။ အခုဟာကလေ ဖွဈနိုငျခကြေ အမြားကွီးရှိတယျဗြ။ ဒါကတိုကျဆိုငျမှုလား။ ဒါမှမဟုတျ တပျမတျောဖကျကပေါ့ စဈဆငျရေးပရိယယျတခုလား ၊ ကနြျောတို့လညျး မခနျ့မှနျးတတျဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဖွဈနိုငျခွအေလားလာကတော့ ဒီနရောမှာ ထိပျတိုကျတှဆေုံ့မှု အသေးအဖှဲလေးတှကေနေ အကွီးကွီးမီးတောကျဖွဈမယျ့အလားလာကတော့ အမြားကွီး ရှိတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒီနရောမှာ အခုလိုတိုကျပှဲငယျတှပွေနျဖွဈလာဖို့ မွပွေငျအခွအေနရှေိနပေုံကိုလညျး ခိုငျကောငျးစံ က
ခိုငျကောငျးစံ ။. ။ Gentlemen's agreement ပေါ့ဗြာ။ ၂ဖကျစလုံးကတော့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးမှုတှရှေိနတောပေါ့နျော။ ဒါပမေယျလို့ တကယျတနျးက ဒီနှဈဖှဲ့က သဘောတူညီမှုက ဥပမာ Bilateral agreement ထိုးထားတာမြိုးက ရှိမနဘေူး။ ဒါပမေယျ့ အောကျခမြှောကွတော့ လှုပျရှားမှုတှေ ဧရိယာတှမှော ဒီအပျေါက အမိနျ့ကို နာခံတယျဆိုပမေယျ့ တညျဆောကျမှုတှကေို တှနေ့ရေတယျ။ ဥပမာ တိုကျပှဲမရှိပမေယျ့လို့ မွနျမာတပျမတျောကလညျး အငျအားတညျဆောကျတာပေါ့။ ဥပမာ လကျနကျ ရိက်ခာ လူအငျအား ရခိုငျတပျတျောကလညျး သူတို့ရဲ့ အနအေထားကို ခိုငျခိုငျမာမာဖွဈအောငျ တညျဆောကျနတောပေါ့နျော။ အဲဒီတော့ဒါက နယျကွှံသှားတာပေါ့နျော။ လှုပျရှားမှုတှမှော အခြိနျမရှေးဖွဈနိုငျမှုတော့ရှိတာပေါ့။ အဲဒါကွောငျ့ ရခိုငျပွညျသူတှကေရော၊ စဈဘေးဒုက်ခသညျစခနျးတှမှောနသေူတှကေရော သူတို့ဒသေကို ပွနျခငျြပမေယျ့ မပွနျနိုငျကွဘူး။ ဒီတိုကျပှဲက ဘယျနဆေ့ကျဖွဈလာမလဲဆိုတာ ခနျ့မှနျးရခကျတာပေါ့နျော။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ရှမှေ့ာဆကျဖွဈလာနိုငျပုံကိုလညျး ဦးဦးလှစော က အခုလိုပွောပါတယျ။
ဦးဦးလှစော ။. ။ အရငျတုံးက ပွောခဲ့ရာမှာလညျး AA ရဲ့ စဈဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျထှနျးမွတျနိုငျ ကိုလညျး သူတပျမှူးတှကေို ထိပျတိုကျတှဆေုံ့တာတှရှေောငျဖို့ဆိုပွီးတော့ပွောထားတာရှိတယျ။ ရခိုငျမှာက ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောရရငျ ရခိုငျတပျတျောရဲ့ အငျအားက သာလှနျအငျအားဖွဈနတေယျ။ နယျမွတေျောတျောမြားမြားကို ထိမျးခြုပျနိုငျတယျ။ လူထုကလညျး ထောကျခံမှုအရမျးပွငျးထနျနတေယျ။ AA အနနေဲ့ ဆိုရငျ ဘကျပေါငျးစုံ တျောတျောလေး အခွအေနကေောငျးတယျပေါ့နျော။ ရငျဆိုငျမယျဆိုရငျ။ အဲတော့ ဒီဟာက မွနျမာတပျမတျောဖကျက သှေးစမျးတာလား မွနျမာတပျမတျောဖကျ မမြှျောလငျ့ပဲထိပျတိုကျတှတေ့ာလား။ ထိပျတိုကျတှတေဲ့နရောက အတျောဝေးတဲ့နရောဆိုတော့ စဈရေးကိုတော့ ကနြျောမခနျ့မှနျးတတျဘူး။ ဒီဖွဈတဲ့ ကိစ်စအတှကျကတော့ နှဈဖကျစလုံးက ဘယျသူအတှကျမှ ကောငျးကြိုးမရှိဘူး။ အထူးသဖွငျ့ မွနျမာ့တပျမတေျာ့အတှကျက ပိုပွီးတော့ အခကျတှမေ့ယျထငျတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ခိုငျကောငျးစံ ကလညျး အရငျလိုမြိုး ရရှေညျတိုကျပှဲကွီးတှဖွေဈလာဖို့ မလှယျပါဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။
ခိုငျကောငျးစံ ။. ။ စဈပှဲကတော့ ဘယျသူမှမလိုခငျြဘူး ။ နောကျတခုက PDF တှရေဲ့လှုပျရှားမှုတှေ ၊ တပျမတျောထဲမှာရှိကွတဲ့ အရာရှိအရာခံ ပုဂ်ဂိုလျတှကေိုယျတိုငျကလညျး ဒီပွညျသူဖကျကို ပွောငျးနတေဲ့အခွအေနတှေရှေိတယျ။ နောကျတခါ ကရငျမှာလညျး ဒီတိုကျပှဲတှရှေိတယျ။ နောကျကခငျြနဲ့လညျးဖွဈနတေယျ။ စသညျအားဖွငျ့ အဲဒီလိုအခွအေနမြေိုးမှာ ၂ဝ၁၈ ၊၂ဝ၁၉ လိုတိုကျပှဲတှဖွေဈဖို့ဆိုတာမြိုးကတော့ ရာခိုငျနှုနျးတျောတျောနညျးပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ တကယျတော့ အခုလို တိုကျပှဲတှပွေနျစဖွဈလာတုံးမှာ စဈကောငျစီပွောခှငျ့ရ ဗိုလျခြုပျဇျောမငျးထှနျး က AA နဲ့ဖွဈတာမဟုတျပဲ ARSA အဖှဲ့နဲ့ဖွဈတာပါလို့ ပွနျပွောထားပါတယျခငျဗြာ။
AA နဲ့ဆက်စပ်ဖမ်းဆီးခံရတချို့ အကျဉ်းထောင်တွင်းရှိနေဆဲ